HAFATRA LEHIBE AVY AMIN’I JESOSY HO AN’NY TAONA 2015
Pasteur Missionaire Lai Ah-thon
TAONAN’NY FAMOKARANA HO AMIN’NY FAMPANDROSOANA LEHIBE.
Hafatra nomen’I Jesosy ny Ray aman-dReny Pasteur Lai Ah-Thon. Somary mokorontana kely Aho hoy Izy (Pasteur Lai) maro loatra ny hafatra nomen’I Jesosy ahy ka nangataka taminy aho mba hamintinany azy. Tahaka ny izan-taona dia nangataka taminy aho mba hamintinany azy. Tahaka ny isan-taona dia nangataka tamin’I Jesosy sy hafany ho antsika amin’ity taona 2015 ity aho: ka nambarany fa: Taonan’ny FAMPANDROSOANA LEHIBE. Izany anefa tsy maintsy miaraka amin’ny voa avy amin’Andriamanitra di any: “NY FANETREN-TENA” izay mitarika ho azy ho main’ny FAHAMASINANA.
Raha misy aza faniriana sy hetaheta ao anatintsika hanao ny asan’Andriamanitra nefa isika tsy manana fanatren-tena dia ho zava-poana ihany. Ohab 15:33.
Mila matahotra an’Andriamanitra aloha isika mba ho Hendry ary hanana fanetren-tena mba hanandratan’Andriamanitra antsika.
Nentin’I Jesosy tamin’ny toerana telo (03) samy hafa mbola tsy fantatro aho:
1) Toerana amoron-drano. Toerana tsara, ahitana sy mora ahazoana rano, tena mahavokatra.
2) Eny an-tendrombohitra: Toerana avo, sarotra ny fidinana sy fiakarana hitadiavana sy hakana rano eny amin’ny renirano.
3) Tany hay: Toerana izay tena sarotra tokoa ny ahitana rano, sady tena lavitra ilay hany loharano tokana.
Deot 8:1-6 “Ny Lalàna rehetra izay andidiako anao anio, dia tandremo harahinareo, mba ho velona hianareo ka hihamaro, ary hiditra sady handova ny tany izay nianianan’I Jehovah tamin’ny razanareo homena azy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran’I Jehovah Andriamanitrao anao tany an’efitra izao efapolo taona izao, hampanetry tena naoa sy hizahan-toetra anao ary hahalala izay ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia nampanetry tena anao izy ka namela anao ho noana, dia nanome anao ny mana hohaninao, izay tsy fantatrao na ny razanao,hampahafantarany anao fa tsy ny nofo ihany no iveloman’ny olona, fa iza rehetra aloaky ny vavan’I Jehovah no iveloman’ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra, ary ny tongotrao tsy nivonto izao efapolo taona izao. Koa aoka ho fantatrao amin’ny fonao, fa tahaka ny fananaran’ny olona ny zanany no fananaran’I Jehovah Andriamanitrao anao. Ary tandremo ny didin’I Jehovah Andriamanitrao, mba handehananareo amin’ny lalany sy hatahoranao azy”.
Fa inona marina no hevitr’ireo toerana telo ireo?
Toerana mety ahitana fahombizana, hany ka mety hamboly toetra hafahafa ao anatintsika satria mety hanetry tena isika na koa hampirehareha ka hanadino an’Andriamanitra.
Deot 8:7-8 “Fa Jehovah Andriamanitrao efa hampiditra anao ao amin’ny tany soa, dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin’ny lohasaha sy ny tendrombohitra, tany misy vary tritika sy vary hordea sy voaloboka sy aviavy ary ampongamben-danitra, tany hazo olive sy tantely”.
1) Ny tendrombohitra
Entina manambara ireo olona izay efa mahomby amin’ny fiainana, itana toerana ambony tahaka ny: mpitondra fivavahana, Minisitra, Mpitantana orinasa. Izay matetika mihevitra fa efa eo ambanin’ny tongony sy fahefany daholo ny zava-drehetra, hany ka miavona sy tsy te-hanetry tena intsony.
2) Tany hay:
Midika ho fahamainana, maro amintsika tamin’ny taona 2014 iny na tamin’ny fiainany mihitsy no tao naty fahasahiranana sy fahantrana tanteraka, misy amintsika no efa mimonomonona, nanotany tena mihitsy aza hoe: “fa dia nahoana loatra?”
Tsarovy fa nataon’Andriamanitra ireny mba hifikirantsika Aminy, ho fizahan-toetra, sanantria tsy famaizana akory fa hampianatra anao hanetry tena amin’ny fahombiazana.
Fehiny: Deoteronomia 8:1-6; Fizahan-toetra.
Fizahan-toetra izay tsy maintsy miaraka amin’ny fanetren-tena.
Tokony hiasa isika:
1- Famokarana ara-panahy
Hanapaka ny famonjena sy fitiavan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teny.
Hitahy ny asan’ny tànanao Andriamanitra, tokony hijery ny asa sy hanao izany amin’ny tahotra sy hovitra.
3- Famokarana aoa an-tokantrano
Fanehoana fitiavana sy hafanana ao an-tokantrano, alohan’ny andehananao hanao asan’Andriamanitra dia jereo aloha izay ho an’ny ankohonanao (baikon’I Jesosy). Jereo tsara daholo ny sakafo ho an’ny vady aman-janaka.
4- Ataovy tsar any asan’Andriamanitra
Tsy manavakavaka ka izay mora sy akaiky ihany no aleha. Tsy tiako itsy fa mahantra, sns, …
5- Aoka izay ny hataka lava
Avadiho amin’ny vohony ny tànanao, izany hoe miasa, fa ho tanterahin’Andriamanitra aminao ny teniny hoe: Ho mpampindrana tokoa ianao, hampisambotra fa tsy hisambotra.
6- Ny fototry ny fahombiazana sy famokarana lehibe dia fanetrentena: Avy amintsika ny fitahiana.
7- Raha feno fankahalana sy lolom-po ao anatinao dia ongoty hatramin’ny fakany izany ka amboleo sy soloy. Fanetrentena, tahotra an’Andriamanitra, fahamasinana, fitiavana, fahendrena, fankatoavana.
- Misy kamo nefa te hahazo vokatra: izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana.
- Ho valian’Andriamanitra ny Mpiandry miteny izay tsy nolazain’Andriamanitra.
Ohatra: dorana hono ity fandriana ity.
Jeremia 29:30-32 “Dia tonga tamin’I Jeremia ny tenin’I Jehovah hoe: maniraha ho any amin’ny babo rehetra, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain’I Jehovah ny amin’I Semaia Nehelima: noho ny naminanian’I Semaia taminareo, kanefa tsy nirahiko izy tsinona, fa nampitoky anareo tamin’ny lainga dia izao no lazain’I Jehovah: Indro efa hamaly an’I Semaia Nehelemita sy ny taranany Aho; tsy hanana zanakalahy honina amin’ity firenena ity izy sady tsy hanam-pifaliana amin’ny hahitana ny soa izay hataoko amin’ny oloko, hoy Jehovah, satria fiodinana tamin’I Jehovah no notoriny”.
- Salamo 90: variana loatra amin’ny asantsika andavanandro isika ka tsy mahita fa miha-antitra isan’andro.
Mandala ny olona:
Antony lehibe tokony hananana
- Mangataka ary famindram-po sy famelan-keloka avy amin’Andriamanitra mba ho tahiana isika.
Fehiny: Takian’I Jesosy isika mba hiasa; indrindra hampamokatra ireo izay heverina tsy nahavokatra taloha amin’ny alàlan’ny voan’ny fanetrentena sy fahamasinana; eny hatramin’ny tany hay.
Alao hery àry: tsy misy tsy hain’Andriamanitra hatao.
Pasteur Lai Ah-thon